Sanduuqa Taageerada Cunnooyinka xagaaga - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
FIIRO GAAR AH: Sababtoo ah xiritaanka iskuullada ee aan la filayn ee masiibada darteed, sanadkan Hunger Free Oregon waxay u wareejin doontaa maalgelinta qaabka Sanduuqa Taageerada Degdegga ah waxayna si ku meel gaar ah u joojin doontaa Sanduuqa Taageerada Cunnada xagaaga 2020.
Ujeedada Sanduuqa Taageerada Degdegga ah waa in la siiyo dhaqaale degdeg ah si isdaba joog ah dugsiga iyo kafaala-qaadayaasha ku salaysan beesha ee bixiya cuntada xilliga dugsigu xiran yahay. Kadib bixinta deeqaha degdega ah, deeqdani waxay wali siin doontaa maalgelinta kafaala-qaadayaasha Cuntada xagaaga (xilliga xagaaga ee rasmiga ah) waxayna bilaabi doontaa dib u eegista codsiyadaas Maajo 1deeda. Deeqaha waxaa la bixiyaa ilaa $5,000 barnaamijkiiba waxayna taageeri karaan noocyo badan oo kala duwan oo ah kharashaadka la xiriira hawlgalka sida: iibsashada qalabka, shaqaaleysiinta, iyo gaadiidka ama kharash bixinta. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Sanduuqa Taageerada Degdegga ah waxaa laga heli karaa dukumeentiga tilmaamaha deeqda.
Codsiyada waxay furan yihiin Isniinta, Abriil 6deeda illaa Juun 1deeda. Codsiyada waxaa dib loo eegi doonaa toddobaad kasta si isdaba joog ah. Fadlan u soo gudbi codsiyada dhamaystiran [emailka waa la ilaaliyay]
Haddii aad hore u gudbisay ama aad qorshaynayso inaad soo gudbiso arjiga Sanduuqa Taageerada Cunta xagaaga, waxaanu wali dib u eegi doonaa codsigaga. Taas beddelkeeda, haddii aad hadda cunto bixinayso sababtoo ah iskuullada xiran, si fudud u soo gudbi warbixin kooban oo ku saabsan Sanduuqa Taageerada Cunnada xagaaga ee codsigaaga wadaagista sida aad u isticmaali lahayd lacagaha xaaladdan cusub. Waad ku mahadsan tahay dadaalkaaga iyo dadaalkaaga bulshadaada waqtiyadan aan la hubin.
Sanduuqa Taageerada Degdegga ah ee 2020: ee Dugsiga iyo Cunnada xagaaga
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno Sanduuqa Taageerada Degdegga ah ee sanadkan: wareegga codsiga cuntada ee dugsiga iyo xagaaga waa furan yahay. Codsiyada Sanduuqa Gurmadka Degdegga ah waxaa la aqbali doonaa Isniinta, Abriil 6-deeda illaa Juun 1deeda iyadoo lagu saleynayo dugsiga iyo kafaala-qaadayaasha bulshada ku saleysan ee bixiya cuntada inta lagu jiro xiritaanka dugsiga.
Si aad u codsato, fadlan buuxi agabyada soo socda oo u gudbi [emailka waa la ilaaliyay]
XEERARKA DEEQDA (PDF)
FOOMKA CODSIGA (DOCX)
La xidhiidh Faadumo Jawaid, Maamulaha Barnaamijka Sare, at [emailka waa la ilaaliyay] ama 503-595-5501 ex. 307
Wax badan ka baro Cunnooyinka xagaaga
Booqo Cunnada xagaaga Oregon
"Degmada Grant waxay noqon kartaa mid yar laakiin waxaan leenahay afaf badan oo aan quudino. Lacagahan la'aanteed ma awoodno inaan gacan ka geysanno la dagaallanka gaajada Oregon oo aan hubinno in ilmo uusan tagin cunto la'aan xagaaga. "
Kimberly Ward, Maareeyaha Xafiiska, Jardiinooyinka Magaalada John Day Canyon iyo Degmada Madadaalada
Inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, tobanaan kun oo carruur Oregon ah waxay cunaan cuntada dugsiga maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, marka dugsigu dhamaado sanadka, sidaas oo kale ishan muhiimka ah ee nafaqeynta waa sidaas. The Barnaamijka Cuntada Xagaaga waxaa loola jeedaa in lagu caawiyo buuxinta farqiga nafaqeynta, iyadoo la siinayo cunto bilaash ah iyo cunto fudud dhammaan carruurta da'doodu u dhaxayso 1-18. Barnaamijyada cuntada xagaaga waxay u furan yihiin qoysaska oo dhan iyagoon haysan warqado ama saxiixin - carruurtu way soo geli karaan! Barnaamijyo badan ayaa sidoo kale bixiya nashaadyo madadaalo leh si ay carruurtu u firfircoonaadaan oo ay u sii wadaan waxbarashada.
Iyada oo loo marayo Sanduuqa Taageerada Cunnada Xagaaga (SMSF), Gaajo-La'aanta Oregon waxay ka caawisaa isku xidhka bulshada iyo qoysaska cunnada xagaaga - iyada oo loo marayo taageerada maaliyadeed iyo kaalmada farsamada ee barnaamijyada Cunnada xagaaga ee cusub ama ballaarinta ee Oregon. Laga soo bilaabo 2009, waxaanu bixinay deeqo yaryar oo dhan $5,000 barnaamijkiiba. Lacagaha deeqda waxaa loogu talagalay in lagu taageero barnaamijyada Cunnada xagaaga oo leh iibsashada qalabka, shaqaaleysiinta, kharashyada gaadiidka, saadka dhaqdhaqaaqa, iyo dadaalka wacyigelinta.
Gaajada-free Oregon waxaa ka go'an inay wax ka qabato sinnaan la'aanta dhaqaale si aan u fulno hadafkeenna. Xogtu waxay tusinaysaa haqab-beel la'aanta cuntada inay si aan qiyaas lahayn u saamayso bulshooyinka midabka leh, soogalootiga dhawaanta yimid, qoysaska keligood ah, bulshooyinka LGBTQIA+, shakhsiyaadka naafada ah, iyo dadka ku nool dhulka miyiga ah ee Oregon. Wareega deeqda 2020, Hunger-Free Oregon waxa ay mudnaan siin doontaa codsadayaasha mudnaanta siiya sinnaanta iyo ka mid noqoshada bulshooyinka aan la adeegin, iyada oo mudnaanta la siinayo barnaamijyada doonaya in la kordhiyo ka-qaybgalka iyo taageerada kooxaha la takooro.
Marka laga soo tago taageerada dhaqaale, Hunger-Free Oregon waxay ku dadaalaysaa inay mid-ka-mid ula shaqeyso deeq-bixiyayaasha si ay u horumariyaan hababka ugu wanaagsan, kor loogu qaado wacyiga, iyo bixinta kaalmada farsamada iyo/ama taageerada barnaamijyada Cunnada xagaaga ee gobolka oo dhan.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in xagaagii 2019, aan awoodnay inaan ku deeqno in ka badan $90,000 barnaamijyada cuntada xagaaga ee Oregon. 24-ka beelood ee soo socda ayaa la guddoonsiiyay deeqaha:
Dugsiga Degmada Morrow
Degmada Dugsiga Parkrose
Naadiga Wiilasha iyo Gabdhaha ee Dooxada Hantidhawrka Galbeedka
Dugsiga Phoenix ee Roseburg
Dugsiga Degmada Estacada
Deeqaha Gudbinta Dugsiga Degmada
HomeForward - Portfolio Degmada Bari
Naadiga Wiilasha iyo Gabdhaha ee Dooxada Rogue
Adeegyada Isku-dhafan ee Dhallinyarada ee Klamath Falls
Dugsiga Degmada Lubnaan
Degmada Caafimaadka Harada
Dugsiga Degmada Oregon
Cuntooyinka ku socda dadka lugaha
South Coast Family Harbor
Degmada Dugsiga Gervais
Cunto loogu talagalay Degmada Lane
Jardiinooyinka Magaalada iyo Madadaalada ee John Day Canyon
Dugsiga Degmada Newberg
Degmada Dugsiga Beaverton
Nafaqo Wanaagsan Ayaa Wax Ka Bedesha
Wax badan ka baro cuntada dugsiga
BOOQO CUNTA DUGSIGA
Nafaqada wanaagsani waxay keentaa farqi